China Silicone (ရေစိုခံ) pile weather strips ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် စက်ရုံ |JYD
ဆီလီကွန် (ရေစိုခံ) pile weather strips များ
အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေစိမ်ခံခြင်းနှင့် UV ဆန့်ကျင်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်
အခြေခံအကျယ်:4~ 40 မီလီမီတာ
Pile အမြင့်:3~ 7mm
1.Silicone အမျိုးအစား weather strips များသည် ဆီလီကွန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် ရေကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုရှည်သည်။
2. ပြင်ပလေဝင်ပေါက်နှင့် လေအေးပေးစက်အတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ကွာဟချက်များနှင့် ယိုစိမ့်မှုများကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန် ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးများတွင် အသုံးပြုသည်။
3. အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်း - ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စုတ်တံသည် ထူပြီး ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ ပွတ်တိုက်မှုနည်းခြင်း၊ ဆူညံခြင်းမရှိ၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ ခိုင်ခံ့စွာခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
4. ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်- တံခါးကိုခံစားရသောတံဆိပ်တုံးသည် အသံခံနိုင်မှု၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုစသည့် ဂုဏ်သတ္တိများစွာရှိသည်။ထို့အပြင်၊ ဤတံခါး weather seal strip သည် တိုက်မိခြင်းမှ ဆန့်ကျင်ပြီး တိုက်မိခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချရန် မှန်တံခါး သို့မဟုတ် ပြတင်းပေါက်များတွင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။
အရောင်: အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အညို
Q: ODM နှင့် OEM ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ကမ်းလှမ်းတယ်။ပုံး ၂၀၀ ကျော်၊ ၎င်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။အရေအတွက် 200 ပုံးထက်မကျော်လွန်ပါက အခကြေးငွေ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ပုံး 200 စုဆောင်းပြီးပါက နောက်အမှာစာမှ ကုန်ကျစရိတ်ကို နုတ်ယူပါသည်။
မေး- ငါ့ရဲ့အမိန့်ကို ဘယ်နှစ်ရက် အပြီးသတ်မှာလဲ။
A: ကျွန်တော်တို့မှာ စက်ရုံ လေးရုံရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် မင်းရဲ့အမှာစာတွေကို တညီတညွတ်တည်း ထုတ်လုပ်ဖို့ စက်ရုံ လေးခုကို ငါတို့ ခွင့်ပြုနိုင်တယ်။20GP ရက် 20 အတွင်း။ရက် 30 အတွင်း 40GP / 40HQ ။
Q: နမူနာကို ပေးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နမူနာကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် တူညီသောအရွယ်အစားရှိပါက၊ သင်လိုအပ်သောအရွယ်အစားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော အခြားအရွယ်အစားများကို သင့်ထံပေးပို့ပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် တူညီသောအရွယ်အစားမရှိပါက၊ အလားတူအရွယ်အစား သို့မဟုတ် အမျိုးအစားကို သင့်ထံပေးပို့ပါမည်။အရည်အသွေးကို ဦးစွာစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Q: အနည်းဆုံး မှာယူမှုပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
A: အရွယ်အစားသည် ပုံမှန်အရွယ်အစားဖြစ်သည့် 5*6mm၊ 7*5mm စသည်တို့ဖြစ်ပါက၊ MOQ သည် 5,000m ဖြစ်သည်။အရွယ်အစားသည် 40*12mm စသည်တို့ကဲ့သို့ ပုံမှန်အရွယ်အစားမဟုတ်ပါက၊ MOQ သည် 20,000m ဖြစ်သည်။
ယခင်- JYD စက်ရုံစျေးနှုန်း ပြတင်းပေါက်နှင့် ဗီရိုအတွင်း ကပ်ခွာဖျံများ ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း။
နောက်တစ်ခု: ဆီလီကွန် အမျိုးအစား
အမျိုးအစား သိုးမွှေးပုံအဖြောင့် ရာသီဥတု ဒဏ်ချက်
5*18mm အနက်ရောင် ရာသီဥတု ဒဏ်ချက်များ